काठमाडौं, २८ वैशाख । नेकपा एमालेभित्रको विवाद पार्टी विभाजनको तहमा पुगेको छ । माधव कुमार नेपाल समूहले समय दिएका दियै छन् । तर ओली समूहबाट कुनै रेस्पोन्स भइरहेको छ ।
ओली समूहका नेताहरुलाई माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई धोकेबाजदेखि गद्दारसम्मको विशेषणसहित सामाजिक सञ्जालमा गाली गरिरहेका छन् । काम चलाउन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त नेपाल समूहका नेताहरुलाई पाखण्डी नै भनेर सामाजिक सञ्जालमा सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
सोमबार उनले लेखे, ‘केही मान्छेहरूकाे जिन्दगी विराेधाभाषले भरिएको र राेचक पाइन्छ,आफ्नै पार्टीकाे सरकारविरुद्ध राजीनामा दिने हल्ला गर्छन्, सांसदहरूलाई तिनैले विराेधमा उकास्छन्, तथानाम बाेल्छन्, अहाेरात्र पार्टी कब्जा, विखण्डन र विभाजनको कृत्य गर्छन् र पार्टी एकताकाे आँसु पनि झार्दै तिनैले वार्ताका कलाबिहीन नाटक पनि गरेका देखिन्छन् ! सायद यस्तैलाई पाखण्डीपन भनिन्छ हाेला ?’
थापाले जसपा नेता महन्थ ठाकुरलाई नै अहिलेको सत्ता समीकरणको ‘नायक’ बनाउँदै प्रशंसा गरिरहेका छन् । ‘पहिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त। अहिले फेरि धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान,’ थापाले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् लेखेका छन्, ‘महन्थ ठाकुरजी निर्णायक। कुरा क्लियर नै छ !’
तर, अंक गणित हेर्दा कुरा त्यसो होइन । शेरबहादुर देउवालाई रोकेर ७६ (३) बमोजिम पुनः सत्तारोहण गरेर संसद विघटन गर्न ओली योजना भत्काउन यतिबेला माधव नेपाल समूह नै निर्णायक छ ।
माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिँदा विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । त्यतिबेला जसपा भने फुट्न सक्छ । जसपा फुटे पनि सरकार बन्छ ।
यतिबेला नेपाल समूहको परीक्षा कहाँनेर छ भने आफूहरुले सांसद पद गुमाएर संसद जोगाउने र सांसद पद जोगाएर संसद गुमाउने ?
यद्यपि, उनीहरुलाई के थाहा छ भने ओलीले केवल तीन दिनका लागि मात्र माधव नेपालहरुलाई कारबाही गर्नेछैनन् । त्यसपछि कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्छन् ।
कारबाही गरिहाल्दैनन् कि भन्ने भ्रमको त्यान्द्रो बाँकी राख्न उनले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् वार्ताको त्यान्द्रो फ्याँकिरहेका छन् र त्यही त्यान्द्रोमा अल्झिएका छन् योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु । उनीहरुले सोमबार राजीनामा दिनबाट रोक्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।
यद्यपि माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरु भने केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र होइन, संविधान समेत ध्वस्त हुने निष्कर्षमा छन् । यस्तो अवस्थालाई ओलीलाई रोक्न जुनसुकै त्याग र जस्तोसुकै बाटो लिन पनि तयार हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ । तर सोही समूहका केही नेताहरुको ओलीको अस्थायी चारोमा अल्मलिइरहेका ओली समूहकै एक नेताले दावी गरे ।
अहिले नै माधव समूहलाई कारबाही गर्दा २८ जना सांसद घट्छन् र विपक्षीलाई सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ । जति रीस उठे पनि दाह्रा किटेरै भए पनि वैशाख मसान्तसम्म माधव नेपाल समूहका सांसदहरुको पद जोगाउनै पर्ने अप्ठेरोमा ओली छन् ।
माधवलाई कारबाही गरिदिँदा महन्थ समूहले भोट नहाले पनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्छ ।
प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्या- २७१
यसको बहुमत संख्या- १३६
काँग्रेस‌+माओवादी+उपेन्द्र यादव+साना दलको मत- १२४
माधव समूहलाई कारबाही गर्दा,
यसको बहुमत संख्या- १२२
माधव पक्षलाई घटाउँदा पनि घाटा, राख्दा पनि घाटाको अवस्थामा अहिले ओली रहेका छन् । किनकी कारबाही नगर्दा नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुल्न सक्छन् ।
‘माधव समूहले कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन्, चेतावनीसम्म दिने हुन्,’ ओली समूहका एक नेताले भने, ‘अन्तिममा देउवालाई रोकेपछि ओलीजीले नै कारबाही गर्नुहुन्छ । राजनीतिमा आक्रामकताको पनि अर्थ हुन्छ जुन कुरा ओलीमा छ, माधव नेपालमा छैन । यसैले हामी हावी हुन्छौं ।’